साँढे ५ खर्ब राष्ट्र बैंकमै थन्किएको छ - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
साँढे ५ खर्ब राष्ट्र बैंकमै थन्किएको छ
विश्वम्भर प्याकुरेल अर्थविद् हुन् । अर्थशास्त्रका प्राध्यापक प्याकुरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा झण्डै ३९ वर्ष प्राध्यापन गरिसकेका छन् । उनले नेपाल र अमेरिकाबाट एमए, पि.एच.डि र पोष्ट डक्ट्रोल डिग्री लिएका छन् । उनले विश्वका करिब ६० मुलुकमा आगन्तुक विज्ञ तथा प्राध्यापक भएर काम गरेका छन् । त्यसैगरी, नेपालका प्रायः सबै जसो उच्चस्तरीय आर्थिक निकायहरुमा विभिन्न भूमिकामा रहेर आफ्नो अमूल्य योगदान दिएका छन् । बजेटको छलफल र चर्चा चलिरहेका बेला पँुजीगत बजेटको कर्यान्वयन तथा त्यसको महत्वका सन्दर्भमा अर्थविद् प्याकुरेलसँग जिष्टखबरले गरेको कुराकानी ः
किन असारमामात्रै पँुजीगत खर्च बढ्ने गर्छ ?
यसमा दुई तीन वटा कुरा छन् । पहिलो कुरा त हाम्रो विद्यमान ऐनमै समस्याहरु छन् । पोक्र्युरमेन्ट एक्ट जुन छ, त्यसमा भएको जटिलताका कारणले पनि अधिकार प्राप्त निकायले खर्च गर्न हिच्किचाउने अवस्थाहरु छन् । जस्तो उदाहरणका लागि टेन्डर आह्वान गर्दाखेरी कम मूल्य राख्नेलाई दिदा त खासै कानुनी जटिलता हुँदैन तर आवेदन दिनेमध्ये बरु अलि बढि नै दर उल्लेख भए पनि राम्रो काम गर्नेलाई स्वीकृत दिउँ भन्दाखेरि चाहीँ समस्याहरु भोग्नुपर्ने अवस्था रहन्छ, जसले गर्दा राम्रो काम गर्ने भन्दा पनि सस्तोमा गर्नेलाई आयोजनाको जिम्मा लगाउनुपर्छ । सस्तोमा गर्नेले प्रभावकारी काम गर्दैनन् अलि ढिला हुन्छ । यो बाहेक हामी कहाँ बजेट नै ढिला आउने टे«ण्ड छ, र आईसकेपछि पनि केन्द्रबाट स्थानीय निकायसम्म पुग्न समय लाग्छ । यसरी केन्द्रबाट बजेट स्वीकृत नै ढिला हुने र त्यहाँबाट स्थानीय निकायसम्म पुग्दा थप समय लाग्ने हुँदा पनि कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त समय रहँदैन । अर्को कुरा भनेको हामी कहाँ हरेक कुरामा राजनीतिकरण हुन्छ । यिनीहरुनै मूलभुत कारणहरु हुन् ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जथाभावी गरिने खर्चले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्छ ?
यसलाई यसरी बुझौंन, मैले २ करोड रुपैयाँ घरको सेफमा राख्नु र त्यसको लगानी गर्नुमा जत्तिको फरक पर्छ, त्यस्तै असर अर्थतन्त्रमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुले पार्छ । अब यसपालीको नौ महिनाको खर्च प्रगति हेर्ने हो भने पनि झण्डै ६२ अर्ब रुपैयाँ बजेटको बचत देखिन्छ । ब्यापार भुक्तानी सन्तुलन बचतनै १ सय ६ अर्ब छ । बैदेशिक पँुजीको बचत २१ प्रतिशतले बढेको छ । आम्दानी पनि अढाई खर्बभन्दा बढि छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरको निक्षेप पनि झण्डै १२ प्रतिशतले बढेको छ । खर्च नभएर नेपाल सरकारको साढे ५ खर्ब त राष्ट्र बैंकमै थन्किएको अवस्था छ । यसले एकातिर हामीसँग खर्च योग्य रकम यति धेरै छ, भने अर्कोतिर खर्च गर्न सकेका छैनौं । जसले हाम्रो पूँजी निष्क्रिय भईरहेको छ । भने हामी प्रतिफलविहिन छौं । यसबाट हामीले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, जनतालाई दिने न्युनतम सामाजिक सेवाहरु जस्तै प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी पु¥याउने निकायमा पनि खर्च गर्न सकेका छैनौं । र अर्कोतिर, महँगी बढिरहेको छ, आम्दानी सीमित छ । रोजगारी बढाउन सकिएको छैन, उत्पादन घटेको छ । यसलाई अर्थतन्त्रमा स्ट्याफ्लेसन भनिन्छ । यो अवस्थाको सिर्जना भनेको हामीसँग भएको पँुजी परिचालन गर्न नसकेका कारण भएको हो ।
पँुजीगत खर्चको सही उपयोगिताको लागि के गर्न आवश्यक छ त ?
मैले अघिपनि भनिसकें, हाम्रोमा हरेक कुरामा राजनीतिकरण हुन्छ । त्यसोहुँदा बरु अन्तरपार्टी समझदारी कायम गरेर निश्चित समयभित्र छुट्टयाईएको रकम सबैतिर वितरण र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । राजनैतिक भागबण्डामा र शक्ति प्रदर्शनको प्रभावमा भन्दा पनि आवश्यकता र उचित अध्ययन पश्चात बजेट विनियोजन गरिने पद्धतीको विकास गर्नु पर्छ ।
सरकारले त सन २०२२ सम्म मुलुकलाई अतिकम विकसितको सुचीबाट विकासोन्मुख मुलुकमा पु¥याउँछौं भनिरहेको छ, यो चाहीँ कतिको यथार्थपरक छ ?
अब विगत ५८ वर्षको औसत वद्धिदर हेर्ने हो भने हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम छ । विकास योजनाहरुले केही लछारोपाटो लगाएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा देश गुज्रिरहेको छ । हामी कहिले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर भन्छांै, कहिले विकासोन्मुख बनाउछौं भन्छौं । अब यदी साँच्चै सन २०२२ सम्ममा विकासोन्मुखको सूचीमा पु¥याउने हो भने हाम्रो वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म हुनुपर्छ । अब त्यसका लागि हामी कतिको सबल छौं त्यो पनि सोच्नु पर्ने कुरा हो ।
हामी अर्थतन्त्र विकासको कुरा गर्दा जहिल्यै वृद्धिदरमै गएर ठोक्किरहेका हुन्छौं, के आर्थिक वृद्धिदर बढेर मात्रै साँच्चै मुलुक समृद्ध बन्छ त ?
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर चाहीँ इराकमा पनि छ, अफगानिस्तानमा पनि छ, के त्यहाँ सेक्युरिटी छ ? चीनमा ३ दशकदेखि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर छ । तर, चीनको तुलनामा अमेरिकाको वृद्धिदर कम छ, तैपनि चीन र अमेरिकाको प्रतिव्यक्ति आयलाई हेर्ने हो भने अतुलनीय भिन्नता छ । त्यसकारण आर्थिक वृद्धिदर मात्रै मुख्य कुरा चाहीँ पक्कै होईन तर यो एउटा महत्वपूर्ण तत्व चाहीँ हो । यसमा मूलभुत कुरा के हो भने राष्ट्रसँग भएको पुँजीको प्रभावकारी ढंगबाट खर्च भई पुँजीको सही प्रयोग हुनसक्नुपर्छ, तबमात्र अर्थतन्त्र समृद्ध बन्छ ।
हामी कहाँ बजेट नै ढिला आउने टे«ण्ड छ, र आईसकेपछि पनि केन्द्रबाट स्थानीय निकायसम्म पुग्न समय लाग्छ । अर्को कुरा भनेको हामी कहाँ हरेक कुरामा राजनीतिकरण हुन्छ ।
सन २०२२ सम्ममा विकासोन्मुखको सूचीमा पु¥याउने हो भने हाम्रो वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म हुनुपर्छ ।
आज बिहिबार कति पुग्यो सुनको मूल्य ? (जान्नुहोस्)
फेरी बढ्यो सुनको मूल्य, जानुहोस् आजको दर भाउ कति?
बजाजले ल्यायो फरक पल्सर १५० नियोन, यस्ता छन् यो बाइकमा सुबिधाहरु
घट्यो अमेरिकी डलरको भाउ , हेर्नुहोस् कुन देशको कति ?
घट्यो सुनको मूल्य, यस्तो छ आज मूल्य !
सुनचाँदीको मूल्य आज कति ? जान्नुहोस्